« prev 1 2 3 … 884 next »
Sagal Radio Services • News Report • September 15, 2019
Haweeney iyo seygeeda ayaa la dhigey qeybta deg-degga ah ee isbitaal ku yaal dalka Hindiya kadib markii haweeneydu ay dhashay gabdho mataano ah iyadoo 74 jir ah.
Waxaa magaalada Muqdisho maanta ka furmay kulan-howleed wadajir ah oo u dhexeeya Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee XFS, Gudigga La-socodka Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ee Baarlamaanka iyo Gudigga Madaxabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka.
Wararka ka imanaya degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamo AMISOM ah lagu weeraray deegaanka Garas-Deelle oo qiyaastii 3km dhinaca Koofur ka xiga degmada Balcad.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • September 14, 2019
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in dhowaan la furi doono wadooyinka dhagxaanta lagu xirey ee magaalada Muqdisho.
Siyaasi Cabdi C/llaahi Axmed oo lagu naynaaso (Cabdi Dheere) ayaa maantay si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan xilka Madaxwaynaha Galmudug 4ta sano ee soo socota, munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan Hotel Aljazeera.
Sagal Radio Services • News Report • September 13, 2019
Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ayaa ka laabatay Heshiis ay horay ula gashay illaa shan shirkadood, kuwaasoo heshiis lagula galay hubinta iyo illaalinta badqabka gaadiidka.